Easy Siyaabaha dib u socon Video in Windows iyo Mac
> Resource > Video > Sida loo dib u socon Videos in Windows iyo Mac
Waxa hubaal ah in mid ka mid ah saamaynta muuqaal ah ugu xiisaha badan ee barnaamijka TV-ga ah waa "video dib u socon" halkaas oo video laftiisa rewinds indhihiinna hortooda dib ugu dhibic pre-soo xulay. Isticmaalka dhabta ah ee saamayn dib u socon video ku kala duwan yihiin, laakiin inta badan waxaa loo isticmaalaa in lagu muujiyo dhacdo gaar ah funny muuqaal ah, ku soo noqnoqda ee line a funny ama xaalad kale oo kaftan ah in loo baahan yahay in lagu celiyo. Xaqiiqada ah in rewinding dhabta ah ee video ah waxaa lagu arki karaa oo kaliya ka dhigaysa xaaladda oo dhan xitaa funnier.
Maalmahan computer hadda si fudud cilinta kara saamaynta isticmaalka dijital duubay video mahad. Video laftiisu u adeegta madal ee saamaynta kulan darbi ah dib u socon taas oo hadda la qorsheeyay karo by software video tafatir sida. Maqaalkani waxa uu ku siin doonaa tilmaamo waxtar leh oo ku saabsan sida loo dib u socon videos in Windows iyo Mac, iyada oo la samaynaayo isticmaalka xorta ah tifaftirayaasha video qaar ka mid ah - Windows Kan sameeyey Movie iyo iMovie.
Qaybta 1aad: Sida loo dib u socon Video la Windows Movie Kan sameeyey
Qeybta 2: Sida loo dib u socon Video la iMovie
Qaybta 1aad: Sida loo dib u socon Video la Windows Movie Kan sameeyey,
Windows Movie Kan sameeyey, ma waxaa ka mid ah shaqada dib u socon, laakiin waxaad weli gacanta ku qaadan kartaa si dhekhso ah oo loox kasta aad rabto in aad dib u socon dibna gaabin snapshots in ay dhererka jir hal video. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu noqon karaa geedi socod dheer tan labaad kasta oo video qaadataa ugu yaraan 12 loox. Haddii aad rabto in aad tijaabiso, kaliya Raac tallaabooyinka hoose.
1. shuban video ah barnaamijka
Burcad Windows Movie abuuray. Markaas guji "Add Videos iyo Photos" ka "Home" tab iyo dhirta si video clip aad rabto in lagu daro saameynta dib u socon. Waxaa Laba-guji.
2. Qaado si dhekhso ah loox kasta
Waxay ku taallaa jir ugu horeysa ee aad rabto in aad dalbato saamaynta. Markaas ka guurto slider hoostiisa ku sanduuqa video ilaa ay meesha saxda ah aad rabto. Wakhtigan, dhufatey "Sawirka" button ka "Home" tab. Dooro gal ah si loo badbaadiyo sawirrada u loox kasta ee dib u socon video ah. Guji "badbaadi" oo si dhekhso ah lagu dari doonaa waqtiga video ah.
Markaas ka guurto slider in ay ku yiilleen soo socda ka dib markii mid ka mid ah uun aad qaaday. Qaado sawir kale. Ku celi nidaamka ilaa aad gaadho dhamaadka qaybta aad rabto in aad dib u socon.
Xaq-riix si dhekhso ah aad video. Dooro "Dooro All." Markaas riix Video Tools> Edit tab iyo ka dibna ku qor "0.08" ee "Duration" box iyo saxaafadda "gala" (haddii aad u qabaneysid 24 looxyada labaad, tani waxay noqon doontaa ah "0,04" mudada labaad).
3. Keydso video
Guudmar natiijada. Haa haddii ay tahay calaamadaha ku ambadeen, oo saxaafadda "Delete." Markaas tagaan "Home" tab ka dibna riix "Save Movie" si loo badbaadiyo faylka sida oo ahaa file wmv ah si ay u la ciyaari kara on your computer.
iMovie, dhinaca kale, waxay bixisaa saamayn dib u socon oo u suurta galinaya in aad dib u socon aad video ku qasabno oo kaliya dhowr ah. Haatan aan aragno sida loo sameeyo.
1. dejinta video ah barnaamijka
Bilow mashruuc cusub. Markaas dooran "Import"> "Movies Import" in browser dooro filimada aad rabto in aad wax ka bedel si iMovie oo guji "OK".
Fiiro gaar ah: qaarkood video (oo ay ku jiraan video shot la video iPhone iyo H.264 tallaalka on fiidiyo Flip) waa in aanay u soo noqon ka hor inta isbedelka xawaare. Si ay iyaga ugu badalo, kaliya labo gool-riix clip ee browser Mashruuca, ka dibna riix "Beddelaan clip Dhan".
2. Codso saamayn dib u socon in video ah
In browser Mashruuca, dooro hal video clip ama kala duwan jir ah oo aad rabto in aad dib u socon. Markaa waa inaad aadaa "clip"> "dib u socon". iMovie si toos ah u gelin doonaa clip a dambe (400 boqolkiiba xawaaraha), iyo sidoo kale nuqul kale ee clip asalka.
Haddii aad qabto kala guurka si toos ah iyo koobab ku soo noqdeen, daaqad arbushin doonaa in laydin sii iyaga dami. Just riix "dami Automatic-guur" button in ay xirto uu furmo. Waxaad iyaga ku noqon karaa mar kale dib dooranaya "File"> "Project Mawduuca", ka dibna xulashada "Si toos ah ku darto kala guurka iyo horyaalka".
3. Dib u natiijada iyo badbaadin aad video
Ka dibna ku rid line cas taagan kasta oo saamayn ku bilaabmaa browser mashruuca oo riix bar Space in Radidiyaha saamaynta ku. Haddii aad ku qanacsan tahay, u tag "Share"> "Dhoofinta Movie" si uu u badbaadiyo video.